theZOMI: Burma News International - March 13, 2013
Burma News International - March 13, 2013
UWSP/UWSA attends the Shan–Kayah Conference
It is reported that representatives from the United Wa State Party/United Wa State Army (UWSP/UWSA) will attend the Shan–Kayah Trust-building for Peace conference which is due to be held in the coming week at Lashio Motel in Lashio, the second capital of Shan State.
Mae Sot school bus crash – kills one, injures 29
A school bus with dozens of Burmese migrant children was involved inacollision withatruck. A three-month old baby was killed in the incident and 30 people taken to local hospitals.
5 Arakanese members elected as central committee member posts of NLD
UN's Quintana concerned about situation in Kachin and Arakan states
Tomas Quintana , UN's Human rights commission Special Rapporteur for human rights in Burma, presentedareport in Geneva on Monday expressing great concern for the continuation of human rights abuses by the government in the north and west regions of the country.
President Thein Sein urged members of the financial commission to approve the revised budget for the 2013-14 fiscal year at the commission's first meeting of the year on March 12, according toareport in state-run newspaper The New Light of Myanmar.
The US has begun importing Myanmar saltwater prawns following the easing of sanctions, according to Myanmar exporters.
SSA/SSPP နှင့် UWSA တို့ ဆက်သွယ်ရေး ပြတ်တောက်စေရန် အစိုးရတပ်က ကြိုးပမ်းခြင်းဖြစ်
အစိုးရတပ်က သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) တန့်ယန်း မြို့နယ် တောင်ဘက်ရှိ SSPP/ SSA ၏ လွယ်လန်း တပ်စခန်းအား စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမှာ SSA နှင့် UWSA အကြား ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း ဖြတ်တောက်ရန် ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း SSPP/SSA မှ ဗိုလ်မှူးကြီးစိုင်းထူးက ပြောဆိုလိုက်သည်။
SSPP/SSA တပ်စခန်းတခုအား အစိုးရတပ် ထိုးစစ်ဆင်နေ
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ၏ တပ်စခန်း တခုအား အစိုးရတပ်က ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေကြောင်း ဒေသတွင်း သတင်းများက ဆိုသည်။
EU သံအဖွဲ့ မြစ်ကြီးနားရှိ ဒုက္ခသည်များနှင့် သာဘာရေးပုဂ္ဂိုလ်များကို တွေ့ဆုံ
ဥရောပ သမဂ္ဂ EU မှ ၁၅ ဦး ပါဝင်သော သံတမန်များ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ အင်္ဂါနေ့က ရောက်ရှိလာပြီး စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ ယနေ့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည်ဟု စခန်းတာဝန်ရှိ တဦးက ပြောသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ လိုင်ဇာ သို့ရောက်
မြင်းခြံ- မုံရွာ မှတဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ ထိန်းချုပ် နယ်မြေသို့ လမ်းလျှောက် ထွက်ခွာ လာကြသည့် ကိုသန့်ဇင်ဦး ဦးဆောင်သည့် (၅၃) ဦးပါ အဖွဲ့သည် မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ နှစ်နာရီတွင် လိုင်ဇာ မြို့သို့ ရောက်ရှိ လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြိုဆိုရေးအဖွဲ့ဝင်များကဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက် ရခိုင်သင်္ကြန် စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပမည်
(၇) ကြိမ်မြှောက် ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက် ရခိုင် သင်္ကြန်ကို ယခုနှစ်တွင် စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
မှတ်ပုံတင်မရှိသဖြင့် နာဂ အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံး
မှတ်ပုံတင်မရှိသဖြင့် နာဂတိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် လူဦးရေ ဆုံးရှုံးမှု ကြီးကြီးမားမား ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု ရန်ကုန် နာဂကျောင်းသားလူငယ် အဖွဲ့ချူပ် (ဥက္ကဌ) ဦးနော်အောင်ဆန်းက မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောခဲ့သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဘဏ္ဍာရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များအား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အသစ်ပြန်လည် ရေးဆွဲထားသည့် ရသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်း (ဘတ်ဂျက်စာရင်း) ကို ဆွေးနွေး အတည်ပြုပေးကြပါရန် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် ဘဏ္ဍာရေး ကော်မရှင်၏ ပထမဆုံး အစည်းအဝေး တွင် တိုက်တွန်းခဲ့သည်ဟု အစိုးရထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။